I-3Y-TZP i-Zirconium induku yensimbi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Ceramic Rods > I-3Y-TZP i-Zirconium induku yensimbi
I-3Y-TZP i-Zirconium induku yensimbi
I-Zirconia / ZrO2 / i-Zirconium I-oxide yinto eyaziwa kakhulu ephezulu yokusebenza phakathi kwazo zonke izakhi ze-oksijithali. Lezi zinhlobo zezingxenye ze-eramic zenziwe ngokususelwa ku-Zirconium Oxide ngokuvamile, kodwa ziqukethe amaphesenti athile amanye ama-oxide engeziwe afana ne-Yttria (Y2O3) noma i-Magnesia (MgO). Kuncike ekutheni izinto ezibonakalayo zezinto ezihlukile zingatholakala ngoba zithonya ingqalasizinda ye-compound.
Sinikeza ubuciko obucacile bokugqoka umshini we-camamic sleeve kanye ne-shaft ceramic, i-plunger ye-ceramic, ipayipi ye-eramic, i-ceramic tube, induku ye-ceramic e-zirconium oxide i-ceramics.
Umkhono we-Zirconia nge-ceramic usetshenziselwa ukushisa okushisa okuphezulu
I-95% i-alumina ceramic I-pin yokugaya insimbi
I-boiler yokushisa i-ceramic insulator
I-Diameter Ground ZrO2 I-Ceramic Rod
I-Yttria iqiniswe i-Zirconia Rod